Wararka Maanta: Talaado, Oct 15, 2019-Khamri iyo dadkii ka ganacsanayay oo lagu qabtay degmada Dhuusa-Mareeb
Wararka Maanta- Talaado, Oct 15, 2019
Khamri iyo dadkii ka ganacsanayay oo lagu qabtay degmada Dhuusa-Mareeb
Talaado, October, 15, 2019 (HOL)-Ciidamada Amaan ka degmada Dhuusa-mareeb ayaa lagu waramayaa in ay gacanta ku dhiggeen tiro badan oo Khamri ah iyo dadkii ka ganacsanayay.
Saraakiisha ciiadmada Amaanka ayaa sheegay in Saddex ruux oo lagu soo qabtay la soo taagi doono maxkamad si sharciga loo waafajiyo.
Dadka ku dhaqan degmada ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay in markii ugu horeysay lagu qabto degmada Khamri ganacsi ahaan loo keenay, iyadoo aan horay looga baran deegaannadan guud ahaan gobolka Galguduud oo ay maamulayeen Ahlu Sunna Waljameeca.
Toddobaadkii la soo dhaafay ayaa waxaa magaalada Boosaaso lagu qabtay khamro badan iyo dadkii watay.
Dadka ku nool magaalada Dhuusomareeb ayaa aad u hadal haya khamrigan tirada badan ee maanta magaaladaasi lagu soo bandhigay, waxaana horey magaaladaasi ugu yaraa maandooriyaasha sida khamriga oo kale.
Inta badan hadad marka la eego gobollada dalka Soomaaliya waxaa caadi ka ah ka ganacsiga Khamriga oo la sheegay in Soomaaliya laga soo galiyo dhinaca Itoobiya.
10/15/2019 2:06 PM EST
Talaado, October, 15, 2019 (HOL)-Rag hubeysan ayaa ugu yaraan 16 qof ku dilay, islamarkaana qiyaatsii tobaneeyo kale ku dhaawacay xaafad yar oo ku taalla waqooyiga bari ee dalka Ethiopia, sida ay booliska sheegeen Isniintii.
10/15/2019 11:09 AM EST
Talaado, October, 15, 2019 (HOL)-Doon usoo socotay magaalada Boosaaso oo rar kasoo qadaday deked ku taalla dalka Cummaan ayaa la sheegay inay ku degtay xeebaha badweynta Hindiya.
Xisbiga WADDANI oo dalbaday in laga saaro komishanka cusub ee doorashooyinka laba xubnood
10/15/2019 8:19 AM EST
Talaado, October, 15, 2019 (HOL)-Gudoomiyaha golaha Wakiilada Baashe Maxamed Faarax ayaa sheegay inuu xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI uu cabasho ka muujiyey laba xubnood oo lagu soo daray guddida doorashooyinka ee cusub.
Dowladda Qatar oo si toos ah u difaacday howlgalka Turkiga ee Syria
10/15/2019 7:13 AM EST
Talaado, October, 15, 2019 (HOL)-Qatar ayaa difaacday hawlgalka Turkiga ee ka dhanka ah dagaal-yahannada Kurdish-ka ee Waqooyiga Syria, ayada oo sheegtay in Ankara ay u dhaqaaqday inay ka hortagto “halis kusoo wajahneyd”.
Xildhibaannada Hirshabeelle oo lagu amray in ay dib ugu soo laabtaan Jowhar
10/15/2019 5:52 AM EST
Talaado, October, 15, 2019 (HOL)-Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle Cismaan Barre Maxamed ayaa ku amray xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle inay dib ugu soo laabtaan magaalada Jowhar xarunta dowlad goboleedka HIrshabelle kadib markii uu dhamaaday fasaxii ay ku jireen.
Axmed Madoobe'' Diyaar ayaan u ahay in aan la hadlo cid kasta oo wax tirsaneysa
10/15/2019 4:09 AM EST
Talaado, October, 15, 2019 (HOL)-Madaxweynaha Dowlad gobolleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa sheegay in uu diyaar u yahay wadahadal lagu xalinayo wax kasta oo la kala tirsanayo.
10/15/2019 2:05 AM EST
Talaado, October, 15, 2019 (HOL)- Madaxtooyada Soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay Gaadii lagu soo xardhay Sawirrada madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo RW Kheyre oo maalintii shalay lagu soo bandhigay xuska Sanad-guuradii Labaad ee ka soo weerarkii Ismiidaaminta ahaa ee 14kii October 2017 ka dhacy Isgoyska Zoobe.
Ahlu Sunna oo saluug ka qabta guddi ay dhawaan magacaawday dowladda Soomaaliya
10/15/2019 1:39 AM EST
Talaado, October, 15, 2019 (HOL)- Mas'uuliyiinta sare ee Ahlu Sunna Waljameeca ee fadhiggoodu yahay degmada Dhuusa-mareeb ee Gobol Galguduud ayaa dood ka keenay guddi dhawaan dowladdu u saartay farsamada iyo dhismaha maamulka Galmudug.
10/15/2019 12:32 AM EST
Talaado October, 15, 2019 (HOL) - Wasiirka Maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa soo saaray qoraal jawaab celin u ah warbixiintii dhawaan ka soo baxday xaafiiska Hanti Dhowraha Qaranka taasi oo sheegaysay in 18 milyan oo dollar ay ka maqan tahay qasnadda dowladda Federaalka.
Kulan looga hadlay muhimadda ka qayb-galka doorashada dalka Kanada
10/15/2019 12:14 AM EST
Isniin, October, 14, 2019 (HOL) - Ayada oo nagu soo fool leedahay doorashada federaalka ee dalka Kanada, ayaa waxaa bishaan 13keedii lagu qabtay magaalada Ottawa kulan looga hadlayo muhimadda ay leedahay in laga qayb-qaato doorashada dhawaan ka dhici doonto dalka Kanada.
Minneapolis entrepreneur, activist to challenge Rep. Ilhan Omar in Democratic primary -BringmeNM Thenews
10/15/2019 3:24 PM EST
A Democratic candidate has announced plans to primary U.S. Rep. Ilhan Omar for her seat in Minnesota 5th District. John Mason, described in a release as "an accomplished diversity & inclusion Executive...
Auditor General’s report ‘erroneous’, Finance Minister says -HOL
10/15/2019 5:29 AM EST
MOGADISHU (HOL) - Finance Minister Abdirahman Beileh has torn into the recently released report by the Auditor General citing inaccuracies and failure by the Office of the Auditor General to seek audience with the Ministry before releasing the report.
Putin visits Saudi Arabia in sign of growing ties -AlJazeera
10/15/2019 1:21 AM EST
Russian President Vladimir Putin has visited Saudi Arabia in his first trip to the kingdom in over a decade, signing oil agreements and discussing regional security, in particular, Saudi Arabia's ongoing rivalry with Iran.
Trump says let ‘Napoleon Bonaparte’ rescue Kurds -AFP
10/15/2019 1:18 AM EST
WASHINGTON — US President Donald Trump suggested Monday that Syria’s formerly US-allied Kurds could look to 19th century French emperor Napoleon Bonaparte for protection after he ordered the departure of nearly 1,000 US troops from the country
Rep. Ilhan Omar raises $1.1 million for re-election bid -Star Tribune
10/15/2019 12:55 AM EST
Congresswoman's high profile, Trump's attacks help her raise $1.1 million.
Ethiopia: Gunmen killed at least 17 people,wounded 34 in Afar region -Borkena
10/15/2019 12:20 AM EST
Armed groups whose motives are not yet identified attacked civilians in Afar region of Ethiopia but it is established that attackers used Somali region special forces uniform and Djibouti Defense Force uniform
Somalia to set up first blood bank in decades -BBC
Somalia’s government says it is setting up a national blood bank for the first time in more than two decades.